စကားပြော အတတ်ပညာ ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကားပြော အတတ်ပညာ ၂
စကားပြော အတတ်ပညာ ၂
Posted by manawphyulay on Aug 8, 2011 in Creative Writing, Short Story | 11 comments
စကားပြောတိုင်း ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး ဆင်ခြင်မိပါသည်
၁။ မှန်လည်း မမှန်၊ အကျိုးလည်းမရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း မနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။
၂။ မှန်လည်းမှန် အကျိုးလည်းမရှိ၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း နှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။
၃။ မှန်ပင်မှန်သော်လည်း အကျိုးမရှိ၍ သူတစ်ပါးတို့ မနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။
၄။ မှန်ပင်မှန်သော်လည်း အကျိုးမရှိသော သူတစ်ပါးတို့ နှစ်သက်သော စကားမျိုးကို မပြောရပါ။
၅။ မှန်လည်းမှန် အကျိုးလည်းရှိ သူတစ်ပါးတို့ မနှစ်သက်သော်လည်း အခါအခွင့်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍ ပြောသင့်မှ ပြောရပါသည်။
၆။ မှန်လည်း မှန် အကျိုးလည်းရှိ သူတစ်ပါးနှစ်သက်သော စကားမျိုးကို အခါအခွင့်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍ ပြောသင့်မှ ပြောရပါသည်။
စာကိုး။	။ ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲကျမ်း
ကောင်းပါတယ်..အမ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောရင်မဆင်ခြင်မိဘူးဗျာ .. နောက်ဆိုဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့ နောက်ထပ် ရှိတာလေးတွေ ထပ်တင်ပေးဦး
ကျောပူလည်း မခံနိုင်ဘူး …နားပူလည်း မခံနိုင်ဘူးလေ …. အေးဆေးလေးပဲနေချင်တာကို…. အိမ်ကလူတွေ အရမ်းပွားကြလွန်းလို့ …..အိမ်မှာဆို စကားကို မပြောဖြစ်ဘူး …. ။ စကားတခွန်းပြောလျှင် နှစ်ခွန်းလောက်က အဆင်မပြေတာ များတယ် ..ဒီတော့ … လူကြီးနဲ့ လူငယ်အမြင်မတူတဲ့အချိန် … စကားမပြောပဲ ၀စီပိတ်နေလိုက်တာက နှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ် … ။
အနှစ်ရှိတဲ့စကားလည်း ပြောတတ်ကြသလို အနှစ်မရှိတဲ့ စကားလည်း ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုစကားမျိုးပဲ ပြောပြော စကားဟာ ပြောပါများလာရင်
ကောင်းတဲ့စကား အပြောများရင်လည်း ကောင်းတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုတွေ ရောက်လာတတ်သလို မကောင်းတဲ့ စကားအပြောများရင်လည်း မကောင်းတဲ့တန်ပြန်သက်ရောက်မှုတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။
တရားပါတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားပြောတဲ့အခါ အစစ်အမှန် တရားတွေပါရအောင် ကောင်းတဲ့စကားတွေ ပြောကြဖို့ ဆိုခြင်း
မှန်ပါတယ်။ “စကားနောက် တရားပါ”ဆိုတဲ့ ဒီဆိုရိုးစကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းက
စကားကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စကားဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောပါများရင်
တန်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်မှုဟာ ပြောတဲ့သူထံ ပြန်ရောက်တတ်ကြောင်း
စကားအပြောများရင် တရားသဘောအရ အမှားရော မမှားရောအတွက် မတရားတာတွေရော တရားတာပါ အမှန်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း
စကားပြောတဲ့သူတွေ ရွေးချယ်ရမှာက တရားတာတွေ
ရောက်လာစေချင်တာလား၊ မတရားတာတွေ ရောက်လာစေချင်တာလား ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားတာတွေ ရောက်လာစေချင်ရင်တော့ စကားပြောတဲ့အခါ တရားတဲ့စကားတွေ
ဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့ စကားပြောတဲ့အခါ တရားတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်စေဖို့ ပြောသင့်တဲ့ စကားတွေ၊ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် စကားတွေကို
ကောင်းတဲ့စကား သမ္မာဝါစာ ဖြစ်စေဖို့
၄။ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ သူများအတွက်လည်း အကျိုးမရှိတဲ့ အချဉ်းနှီးပြီး သိမ်ဖျင်းတဲ့ စကားမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ကြရမယ်လို့
၆။ မဟုတ်မမှန် အကျိုးလည်းမရှိ သူတပါးလည်း မကြားနာလိုတဲ့ စကား
ဆိုတာတွေထဲက ဟုတ်မှန်ပြီး အကျိုးရှိကာ သူတပါးလည်း ကြားနာလိုတဲ့ စကားနဲ့
သူတပါးမကြားနာလိုပေမယ့် ဟုတ်မှန်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ စကားဆိုတဲ့
ဘုရားရှင်ဟာ စကားနောက်မှာ ကောင်းတဲ့ တရားတွေပါဖို့ စကားခြောက်ခွန်းထဲက လေးခွန်းကိုပယ်ပြီး
ဒါဟာ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ စကားနောက် အမှန်တရားပါဖို့ ကျင့်သုံးတော်မူတဲ့
ဒါပေမယ့် ပုထုဇင်တွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ စကားကို အထိမ်းအကွပ်မရှိ၊ စောင့်စည်းမှုမရှိဘဲ
လိုရင်လိုသလို မလိုရင် မလိုသလို ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။
တရားတဲ့စကား၊ မတရားတဲ့ စကားတွေ နားမလည်ဘဲ ပြောချင်သလို လက်လွတ်စပယ်
လိုချင်တာရှိရင် လိမ်ပြောရမှာလည်း ၀န်မလေးသလို မြှောက်ပြောရမှာလည်း
အပြစ်ပြောရမှာလည်း ၀န်မလေးတတ်သလို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းကာ အပုတ်ချရမှာလည်း
ဒီလို စကားကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် အလွယ်တကူ ပြောဆိုတတ်တဲ့ အတွက်လည်း မဟုတ်မတရားတဲ့ စကား
အပြောများလာခြင်းရဲ့ ရလာဘ်အဖြစ် နောက်ပိုင်း
ဒီလိုပြောဆိုရတာကို အပြစ်တစ်ခုလို မမြင်တော့ဘဲ မဟုတ်တာ၊
မကောင်းတာမှန်သမျှ ပါးစပ်က အလွယ်တကူ ပြောဆိုဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ မကောင်းမှု အကုသိုလ်ရဲ့ သဘောကလည်း အဲဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါများလာတဲ့အခါ
မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုလို့ မမြင်တော့ဘဲ သာမန်နေ့စဉ် ထမင်းစား
ရေသောက်အလုပ်တစ်ခု အဖြစ် ထင်လာတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မကောင်းမှု အကုသိုလ်ဟာ အသေးလေးဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့လို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်
အခုလည်း ဒီလိုပါပဲ။ စကားကို အလွယ်တကူ အထိန်းအကွပ်မရှိ ပြောတတ်တဲ့အတွက်
မတရားတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်တတ်ကာ အဲဒီစကားနောက်
မတရားတဲ့ အရာတွေ ပါကုန်တာ
သာမန်ပုထုဇင်တွေ အနေနဲ့ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းကြတဲ့
ငါးပါးသီလထဲမှာ အထိန်းရအခက်ဆုံး သီလသိက္ခာပုဒ်ဟာ မုသာဝါဒ သိက္ခာပုဒ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုအနေနဲ့ ထိန်းစေလိုရင်း ဖြစ်ပေမယ့် ဒီပါးစပ်တစ်ခုကို ထိန်းဖို့ဟာ
အတော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစကားမှာ “အပေါက်တစ်ရာကို
ပါးစပ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကို ပိတ်ဖို့မလွယ်ဘူး” လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားကြည့်မိရင်နေ့စဉ်ပါးစပ်က
ပြောတဲ့အရာတွေမှာ ကောင်းတာထက် မကောင်းတာက များတတ်တာကို သတိပြုမိကြမှာ
ပါးစပ်က ကုသိုလ်နဲ့စပ်တဲ့ စကား၊ ကောင်းတဲ့စကား၊ ရတနာသုံးပါးနဲ့စပ်တဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြတာထက် ဘယ်သူက ဘာဖြစ်တယ်၊
သူများမကောင်းပြောတဲ့ စကား၊ အတင်းပြောတဲ့စကား၊ အပြစ်ပြောတဲ့ စကားတွေပဲ
များနေတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မကောင်းတဲ့ စကားစတာတွေ
ပြောဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဒီလူတစ်ယောက်ဟာ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်း လုပ်ဖို့
မဟုတ်တာကို ပြောတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မလုပ်နိုင်တဲ့ အကုသိုလ်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုသလို ပါးစပ်က မဟုတ်တာတွေ
မကောင်းတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း အလွယ်တကူ လုပ်ဖြစ်တတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က သားတော် ရာဟုလာကို “ချစ်သား ရာဟုလာ မုသားဆိုလျင် ရယ်ဖွယ်မျှပင် မပြောနဲ့” လို့ မိန့်တော်မူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနှုတ်ကိုမစောင့်စည်းဘဲ အလွယ်တကူ ကျူးလွန်တတ်တဲ့သူတွေဟာ
ထိခိုက်စေကာ စကားနောက် တရားပါကုန်တတ်တဲ့အတွက် စကားပြောတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့တရားတွေပါအောင် ပြောဆိုကြဖို့
နောက် ပါးစပ်က ပြောတဲ့စကားဟာ မမှန်တဲ့ စကားတွေများနေ၊ အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေ များနေတဲ့အခါ အဲဒီသူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဟာ
သွားလည်းမညီ ဖြစ်တတ်ကြောင်း စသဖြင့် စာပေအဖွင့်တွေမှာ ဆိုပါတယ်။
အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ ရတနာ့ဂုဏ်ရည် စာအုပ်မှာလည်း ဆရာတော်က “မုသားစကား၊ ပြောဆိုငြားမူ၊ စကားမပီ၊ သွားမညီတည်း၊ ပုတ်ညှီပါးစပ်၊
ဣနြေ္ဒနောက်၊ ပုံယွင်းဖောက်၏၊ မရောက်သြဇာ၊ နှုတ်လျှာကြမ်းထော်၊
လျှပ်ပေါ်လော်လီ၊ စိတ်မတည်သည်၊ ရှောင်ကြဉ်အပြန် အကျိုးတည်း”လို့ ဆောင်ပုဒ်ကဗျာ ဖွဲ့သီထားပါတယ်။ ဒါဟာ မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကားကိုပြောဆိုတတ်တဲ့
သူတွေထံ ရောက်လာနိုင်တဲ့ သက်ရောက်မှု အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ မှန်ကန်တဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့ သူတွေကျပြန်တော့ စကားပီပြီး သွားညီကာ ခံတွင်းအနံ့ကောင်းခြင်း စတဲ့ ကောင်းတဲ့တန်ပြန် သက်ရောက်မှု
အရှင်မဟာမေဂ္ဂလာန်မထေရ်မြတ် နတ်ပြည်ကိုကြွတော့ နတ်ပြည်မှာ နတ်သားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပါတယ်။ ဒီနတ်သားနဲ့တွေ့တော့ အရှင်မြတ်က “နတ်သား…
ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့လို့လဲ”လို့ မေးတော်မူတဲ့အခါ အမေးခံရတဲ့ နတ်သားက
“အရှင်ဘုရား… တပည့်တော် ပြောရမှတောင် ရှက်လှပါတယ်ဘုရား…၊ တပည့်တော်
လူ့ပြည်မှာတုန်းက တစ်ခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဘုရား၊
ဒါပေမယ့် မုသားမပြောဘဲ အမှန်ကိုသာ ပြောခဲ့တဲ့ သစ္စာအလုပ်တစ်ခုတော့
လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီ အမှန်ကိုပြောခဲ့ခြင်း ဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလ်လေး
တစ်ခုနဲ့ပဲ တပည့်တော် နတ်ပြည်ကို ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား…”လို့
ပြန်လျှောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့စကားကို ပြောဆိုရခြင်းရဲ့
ကောင်းတဲ့တန်ပြန် သက်ရောက်မှုရဲ့ စကားနောက် တရားပါခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စကားဆိုတာ တရားပါမှ မတရားတာကို ပယ်နိုင်ပြီး ကောင်းတဲ့အရာတွေ
ပါမှာလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက စကားနောက် တရားပါဆိုတဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်း ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြောတဲ့အခါ စကားနောက်ကို တရားတွေက
ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ ကောင်းတဲ့တရားတွေ ပါလာစေဖို့ စကားပြောတဲ့အခါ
ကောင်းတဲ့စကားတွေ ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းလည်းပြောတတ် မကောင်းလည်း ဟောတတ်တဲ့ ဒီပါးစပ်ဟာ
အကောင်းရမှာဖြစ်ပြီး မကောင်းဟောရင် မကောင်းရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
အကောင်းလည်းပြော အကောင်းလည်းဟောရင်း ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ စကားနောက်ကို ကောင်းတဲ့တရားတွေ ရောက်အောင် လေ့ကျင့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုရင်း
ဒါကြောင့် ပါးစပ်ဆိုတာ ပြောဖို့နဲ့ စားဖို့အတွက် သဘာဝက ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြောချင်ရာပြော စားချင်ရာစား မယ်ဆိုရင်တော့
ကိုယ်စားတဲ့ အစားတွေကြောင့်ပဲ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု အကျိုးတရားတွေ
ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် အကောင်းပြောပြီး အကောင်းစားနိုင်အောင် ပြောသမျှစကားတွေမှာ ကောင်းတာတွေ ဖြစ်စေဖို့နဲ့
လောဘတဏှာတွေ မဖြစ်စေဖို့ စကားနောက်မှာ တကယ့်အစစ်အမှန် တရားတွေ
ပါအောင်သာ ကြိုးစားကြပါလို့ စေတာနာထား မေတ္တာအားဖြင့် တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံး စကားနောက်ကို တကယ့်တရားတွေပါနိုင်ကြပါစေ…။
Manaw,Thanks for yr sharing.I wana to read yr own ideas and share about yr topic more than our Buddha’s six kinds of saying words as we have already heard before.
Shweinsi, Is it yr. own comment orapost?It is too long !It’s really sharing ofamonk’s blog.
I think you’d better put this asapost.Is it yr own idea or sharing Ashin Wiseita’s blog? အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပဒါယီ).Which one? May I know.
မန်းသူရေပိုစ့် ပါ….ပြီးတော့ဒါကဆရာကြီးလုပ်တယ်ထင်မှာစိုးလို့ ဆရာတော်စာနဲ့ ပါပူးတွဲ ပါတယ်..လွန်ခဲ့ တဲ့ ၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီ….
မနောစာမှာလိုနေတာရှိလို့ ..စ..ဆုံး….သတိထားသင့်တာလေးကောမက်အနေနဲ့ 
ကျမ…ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲ မှာအချင်းချင်းစကားများတဲ့ အခါ..
ဒီစာကကျမလက်ထဲ မှာ..အဆင်သင့်ယူလို့ ရတဲ့ နေရာမှာအမြဲထားရတယ်လေ…
ကျမနဲ့ တသားတည်းတွေ့ ရမယ့်စာပါဘဲ..
ဒီသဘောတရားတွေကို လူတိုင်းကြားဘူးကြ သိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားတဲ့သူက နည်းပါး ပါတယ်။
သဘောတရားတစ်ခု ကို ပါးစပ်ကပြောနိုင်တာ လက်ကချရေးပြတာထက်စာရင်
ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးရင် တစ်နေကုန် ဘာတွေပြောထားသလဲ ပြန်စဉ်းစား။
စဉ်းစားမိတော့ ကိုယ်တစ်နေ့လုံးပြောတာတွေမှာ အမှားတွေအများကြီးဆိုတာ နေ့စဉ်တွေ့နေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက်နေ့မှာလဲ မှားမြဲ မှားဆဲပါဘဲ။
ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ် ကိုယ်ကဘာပြောခဲ့တယ် ဘယ်သူက ဘာပြောတယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့။
ကျနော်တို့အားလုံးက သာမန်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက် သိတော့သိတယ် မကျင့်သုံ့းနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
သီအိုရီအရသိနေတာနဲ့ လက်တွေ့ ဘ၀မှာ ကျင့်သုံးနိုင်တာ ကွာတော့ကွာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကြိုးစားလို့ ………………………..
ဒီပါးစပ် တစ်ပေါက်တည်းရှိလို့သာရယ်ပဲ (ပါးစပ်တစ်ပေါက်ဆိုတာ စားလည်းစား၊ ပြောလည်းပြော)
အသိခက်သော အနက်ကို ပြဆိုသောအခါတို့၌
ဝစနာယဝ ခေါ်စကား၏ အစိတ်အပိုင်း ငါးပါးလုံးကို
၁။ ပဋိညာ – မိမိ၏ဝါဒ အဖြစ်ဖြင့် ဝန်ခံတင်ပြချက် အဆိုတင်ပြချက်
၂။ ဟေတု – ထိုတင်ပြချက်မှန်ကန်ကြောင်း သိစေရန်အကြောင်းပြချက်
၃။ ဥဒါဟရဏ – ပုံတူ ဥပမာထုပ်ပြချက်
၄။ ဥပနယ – ဥပမာနှင့် ဥပမေယျ နှီးနှောဆောင်ကပ်၍ ပြချက်
၅။ နိဂုံး – အဆုံးသတ်အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ချက် – တို့ပင်ဖြစ်သည်။
၁။ အသံသည်မမြဲ၊ ( ပဋိညာ )
၂။ ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောကြောင့်၊ ( ဟေတု )
၃။ ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောအရာဟူသမျှသည် အိုးခွက်ကဲ့သို့ပင် မမြဲသည်ချည်းသာ(ဥဒါဟရဏ)
၄။ ထိုအတူပင်အသံသည်လည်း ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိ၏ ( ဥပနယ )
၅။ ထို့ကြောင့် အသံသည်မမြဲ ( နိဂုံး )
ထိုထက်ထင်ရှားသော ပုံစံတစ်ခုကို ထုပ်ပြဦးအံ့
၁။ ထိုတောင်၌ မီးရှိ၏ ( ပဋိညာ )
၂။ ( အဘယ့်ကြောင့်နည်း ) မီးခိုးရှိနေသောကြောင့်တည်း( ဟေတု )
၃။ မီးခိုးရှိရာအရပ်တိုင်းမှာ စဖိအိမ်၌ကဲ့သို့ မီးရှိစမြဲပင် ( ဥဒါဟရဏ )
၄။ ထို့အတူပင် ထိုတောင်၌ မီးခိုးရှိနေသည် ( ဥပနယ )
၅။ ထို့ကြောင့် ထိုတောင်၌ မီးရှိကြောင်း သိရပေသည်။ ( နိဂုံး )
စာအုပ်ထည်းမှာပါတဲ့ ဘဒ္ဒ န္တတွေရဲ့ စကားပြောနည်းလေးကို ကြုံလို့ ပြောပြတာပါ
ကိုယ်ကတော့ ဘဒ္ဒ န္တ မဟုတ်လေတော့ အဆင်ပြေသလိုပြောတာပါဘဲ
အဆင်ပြေသလို ပြောလို့ရရင်ရ မရရင်တော့